Shabakada Iftiinka Serendipity | Laga soo bilaabo Linux
Webka Serendipity Light
phico | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Saaxiibbo waad salaaman tihiin !. Hubinta xirmooyinka ay Debian, Waxaan helay oo aan isku dayay degel aad u fudud oo si dhif ah looga hadlo Tuulada WWW. Waxay ku saabsan tahay Dabacsanaan. Magaca i xasuusinaya taxanaha telefishanka. Ma garanayo, laakiin waxay maskaxda ku haysaa wax sidaas oo kale ah. Hagaag, ka faa'iideysiga isla rakibaadda ayaa lagu sharaxay WordPress ka badan Lighttpd + APC oo isku uruuraya, Waxaan rakibay xirmada anigoo adeegsanaya:
karti u rakibida serendipity
Kadib markaan kajawaabo su'aalaha adag ee Ma rabtaa inaad ku kaydiso keydka xogta serendipity < > Si; Nooca keydka macluumaadka ee loo isticmaalo deggenaanshaha: MySQL, oo ku dhammee furaha isticmaale ee keydka MySql iyo wixii la mid ah, waxaan ogaaday in Serendipity Light Blog horay loo rakibay.
Markii dambe waxaan sameeyay xiriir calaamadeysan anigoo adeegsanaya:
ln -s / usr / share / serendipity / www / /srv/web.amigos.cu/htdocs/serendipity
adigoon ka baqayn inaad qalad sameyso markaad dhigeyso asalka barta, maxaa yeelay magaca "serendipity" maahan wax caadi ah. Waxaan farta ku galiyay biraawsarkayga URL-ka http://web.amigos.cu/serendipity, oo waxaan ka helay Bog soo dhaweyn ah nus Ingiriis iyo badh Isbaanish. Ka dib markaad marin ka hesho Aaga Maamulka iyada oo loo marayo adeegsadaha admin iyo lambarka sirta ah adminxarfaha hore, waxaan galay gudiga xakamaynta ee blogka, tifaftiray soo galida kaliya aakhirkiina wuxuu ahaa sida ku cad sawirka soo socda:
Waxay ahayd wax fudud.
Waxaan ku martiqaadeynaa xawaareyaasha jecel inay Serendipity isku dayaan. Xaqiiqdii waxaad kaheli doontaa waxyaabo badan oo wanaagsan. Tifatiraha boostada ayaa ah mid aad u fiican. Xulista Mawduucyada ayaa aad u kala duwan. Isticmaalka kheyraadka, hooseeya. Waanan ku samayn karaa wixii aan doono.
Tijaabi in heerka ugu fiican ee runta lagu dhaqmo ay tahay ku dhaqanka.
Ilaa xiisaha soo socda Asxaabta!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Webka Serendipity Light
Waxay umuuqataa mid wanaagsan waan iskudayaa.
Fiican, laakiin waxaan dareemayaa inaan aad u jeclahay isticmaalka WordPress.
Aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga.
Ku jawaab Fico
WordPress ka badan Lighttpd + APC ee Isku-ururin (II iyo finalka)
WordPress oo ka sarreeya Lighttpd + APC oo ku jira Isku-ururin (I)